'Shaki weyn oo ka dhashay' hadalkii MAHDI GUULEED - Caasimada Online
Home Warar ‘Shaki weyn oo ka dhashay’ hadalkii MAHDI GUULEED
‘Shaki weyn oo ka dhashay’ hadalkii MAHDI GUULEED
Guuleed oo goob xaflad ah ka hadlayay ayaa waxaa uu xusay in doorashada wareegga kuwaad ay ku guuleysan doonaan sidii ka dhacday Galmudug, Hirshabeele iyo Koonfur Galbeed.
“Madaxwayne Laftagareen wareegii kowaad ayuu ku soo baxay,Qoorqoor wareegii kowaad buu aqlabiyad ku soo baxay,mar sadaxaad waxaan ogeyn Cali Guudlaawe wareegii kowaad ayuu ku soo baxay marka waa xilligii wareega kowaad 2020 yaan loo deyma daraan,” ayuu yiri Guuleed.
” Waxaa aad u mahadsan saaxibkey Mahdi oo aad saaxibo aan u nahay wuxuu shacabka Soomaaliyeed siiyay qish ku saabsan doorashada soo socota iyo sida ay u ekaanayso,”, ayuu Cabdikariim.
” Doorashadu waxay u baahan tahay kalsooni in lagu qabto,doorashadu waxay u baahan tahay isla-ogol,doorashada waxay u baahan tahay hufnaan intaas haddii aysan jirin doorasho ma hirgali karto,” ayuu yiri Cabdikariim.
” Haddii dalka Soomaaliya guul siyaasadeed la gaaray waxay ahayd in 4 sana-ba mar la qabto doorasho heshiis lagu yahay , doorashadaasi heshiiska lagu yahay-na qofkii ku soo baxa-na madaxwayne iyo hoggaan dal inuu yahay loola shaqeeyo, waa midda uu ku yimid maxamed Cabdulahi Farmaajo,” ayuu yiri Cabdikariin.
“Cid diidan madaxwayne Farmaajo ma laha, cid neceb malaha, madaxweyne waa loo aqoonsan yahay laakiin isaga jihadii la rabay inuu dalka u jeediyo jiho aan ahyn u jeediyay, ayuu yiri Guuleed.
Haddii anaga warkeena la dhageysan waayo waxaan u aragnaa dowladda in doorasho xaq iyo xalaal ah rabin iney doorashadii boobeyso , madaxwaynuhu-na uusan rabin uu doorasho galo, ayuu yiri Geelle.
Doorashada madaxwaynanimada Soomaaliya ayaa sida ku xusan heshiikii ay wada gaareen madaxwayne Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada waxaa lagu wadaa in la qabto bisha February ee sanadka soo socda.